Indonezia: Ireo Tondradrano Nampihitsoka Ny Renivohitra Sy Ireo Mponina Tao Aminy · Global Voices teny Malagasy
Indonezia: Ireo Tondradrano Nampihitsoka Ny Renivohitra Sy Ireo Mponina Tao Aminy
Voadika ny 03 Novambra 2017 16:22 GMT
Nisarika ny sain'ny media iraisam-pirenena indray i Indonezia noho ny loza voajanahary iray hafa. Tamin'ity indray mitoraka ity, Jakarta renivohitra indray no nolalovan'ireo tondradrano ratsy indrindra tao anatin'ny dimy taona. Nampihorohoro ny rehetra ireo tondradrano ireo – ireo asa fandraharahana, ny hetsi-bahoakany ary ireo asa isanandron'ny governemanta.
Sary avy amin'ny pejy Flickr an'i Rifle
Manodidina ny 340.000 ny vahoakan'i Jakarta no voatery nandositra, namoy ny zavatra rehetra mba hanavotany ny tenany irery. Manodidina ny 200.000 no tsy manana hialofana.
Manao tatitra isanandro i Ferry Rahman mikasika ny tranga misafotofoto ao an-tanàndehibe izay azo tamin'ny andro voalohany nirotsahan'ny orambe, oram-be izay niafara tamin'ny tondradrano nahafatesana olona roapolo hatramin'ny andron'ny 5 Feb 2007.
Tao anaty tatitra androany, miresaka mikasika ireo asa nataony ho fanampiana ny nenitoany izy izay tena niharan'ny faharavàna goavana ny tranony:
Efa tany ny reniko ary efa lasa ny tondradrano. Tsy mety mino aho hoe andro vitsivitsy izay dia feno rano avokoa ny 1/4-n'ny trano. Tsy azoko noeritreretina ireo loza naterany.
Somary nisy masoandro tamin'izay, niposaka ny masoandro ary… andro hafa iray mahafinaritra. Minitra vitsy monja no nirotsaka ny orana nandritra ny tontolo andro, nefa tamin'izay dia tena andro mibaliaka!
Niditra tao an-trano aho mba hijery ireo simba. Mibaribary fa maro tamin'ireo fitafiany sy ireo lamba firakotra no kotsa sy maimbo. Maro tamin'ireo kojakojan-dakozia ihany koa no nitsinkafona tao anaty rano, nodiovinay izy ireo, saingy ny sasany tamin'izy ireo no tsy azo namboarina intsony (efa tonta ihany koa tsy hita ho ampiasaina izy ireo), tsy maintsy narianay.
Na dia ny roa tamin'ireo fandriany aza dia tsy maintsy nariana avokoa. Eny, fandriana misy vimiaina!
Saingy afaka soloina izy ireny. Ireo antontan-taratasy ofisialy an'ireo zanak'olom-pianadahy tamiko no tena nahatalanjona ahy indrindra, anisan'izany ny maripahaizana azony tamin'ireo fianarana ambaratonga faharoa, ireo kopia nahaterahana, sy ny sisa. Kotsa sy simba avokoa izy rehetra ireo. Tsy haiko hoe ahoana no fomba hanoloana azy ireo.
Vinanio ny tahotra nanjo azy… hanadino mikasika azy ireo sy handao ny trano.
Noho izany, ny efatra taminay nanadio izay azo nodiovina hatramin'ny tolakandro. Tao anatin'ny fahafantarana fa tsy maintsy hiverina izahay ary hanadio indray raha mbola miverina ny tondradrano.
Nody izahay taoriana kelin'izay.
Nalefanay ny fahitalavitra mba hahazoana ireo vaovao mikasika ny tondradrano.
Amin'izao fotoana izao, na ireo orinasa aza mandefa hafatra amin'ireo mpiasany mba tsy hiasa rahampitso.
Ahoana no fomba hanampiana
Peduli (midika hoe fiahiana) nandefa ireo rohy tena ilaina mankamina vohikalam-pikambanana iray misahana ny fanampiana ary ireo kaontiny notantanana manokana mba hanampiana ireo tràboina noho ny tondradrano. Ireo rohy sy ny banky fitehirizambola dia mahasoa ho an'ny Indoneziana mpikambana any amin'ny faritry hafa ao amin'ny tanàna maniy hanolo-tanana.
Mandritra izany fotoana izany, ho an'ireo olona tsy indoneziana na ireo izay mipetraka ivelan'i Indonezia, manafatra aho ny mba hanaparitahana ny fanampian'izy ireo amin'ny alàlan'ireo fikambanana misahana ny fanampiana iraisam-pirenena izay tena fantany tsara. Ny hafatrafatr'i Unspun no iray tena tsara.
Bilaogera hafa miresaka mikasika ny tondradrano
Javajive: Tondra-drano ao Jakarta
Jakartass: Mametra-panontaniana ireo tondra-drano ao Jakarta: Iza no homena tsiny?